Kuvhara kweLectulandia: iyo nzira dzakanakisa shanu | Gadget nhau
Kuvhara kweLectulandia: iwo mashanu akanakisa dzimwe nzira
Imwe yemawebhusaiti ekuverenga ane mukurumbira, ayo anga achirera katarogu yemabhuku, anogona kuvhara, sekureva kwerunyerekupe. Izvi zvinotimanikidza kutsvaga imwe nzira kana tichida kuramba tichinakidzwa yemahara ePDF, Epub, uye MOBI mabhuku. Chimwe chinhu chakafanana chakaitika EpubLibre paakamira kushanda, sezvo iri raive rakakurumbira webhu reEpub mabhuku nePDF paInternet, iine imwe yemabhuku akakurisa uye huwandu hukuru hwevashandisi venguva dzose.
Iye zvino zvinoita sekunge zvakafanana zvichaitika neLectulandia, saka tinomanikidzwa kutsvaga dzimwe nzira dzakavimbika. Muchikamu chino tiri kuzopa dzimwe nzira shanu dzekupa Lectulandia mune yekuvhara kana kusingaperi kudonha uye nekudaro ramba uchinakidzwa nekatalog yakazara yemabhuku emahara paInternet.
Edza Amazon Kindle Unlimited mahara kwemazuva makumi matatu uye kuwana kupfuura 1 miriyoni mabhuku pane chero chinhu.
1 Lectulandia inovhara here?
2 24 Zviratidzo
Lectulandia inovhara here?
Zvakanaka, zvese zvinoratidza kuti uye kana rwizi ruchirira ... Iyi webhusaiti yanga ichipa vazhinji vashandisi kwemakore nenhamba huru yemabhuku mumafomati ese. Asi Isu tanga tichiverenga runyerekupe kwemwedzi pamusoro pekugona kwayo kuvhara kana kudonha zvachose nekuda kwemamwe matambudziko emutemo. Iine madonhwe enguva pfupi, chimwe chinhu chakafanana nezvakaitika nemamwe mawebhusaiti ayo anopa zvirimo zvakafanana.
Pari zvino kubva pazuva randanyora chinyorwa ichi, iyo webhu mune yayo yekutanga dome iri pasi asi kana tichienda ku www., evapoker.com kana tichigona kuiwana. Nedudziro idzi dzedomain, maitiro acho anogona kuwedzerwa zvishoma sezvinoitika nePiratebay semuenzaniso. Kana isu tikadzokera kumashure munguva uye tichidzokera ku2019 kwaive nenhau kuti mutongi akarayira kuvharwa kwemapeji akati wandei nezvinyorwa zvepirati uye pakati pazvo pane Lectulandia, saka shanduko yedomain inogona kuve chinhu chinowanzoitika.
Parizvino tinogona kuenderera mberi tichishandisa Lectulandia kubva ku .me domain asi kutambudzwa hakumire sezvo mutemo uri pachena pane izvi. Saka vashandisi vazhinji vachamanikidzwa kutsvaga dzimwe nzira uye muchinyorwa chino isu tichaenderera mberi nekutaurisa zvimwe zvacho.
Iyo yakanakisa imwe nzira hapana mubvunzo kuti 24 Zviratidzo matinogona kurodha pasi zvakawanda zvemukati mahara uye zvakachengeteka kunyangwe isinga farire akasiyana mafomati, saka ruzhinji rwemabhuku aya richava muPDF, kunyange fomati iyi ichiverengeka nechero mudziyo. Uye zvakare, ino webhusaiti zvakare inopa yayo yega application kurodha pasi ese ari maviri mabhuku uye audiobooks kubva kunharembozha yedu.
Kana tikatsvaga katarogu yayo, tinowana mabhuku anodarika hafu yemiriyoni muPDF, asi kuti tivape tinofanirwa kuvhura account pasi pekunyoresa kana kushandisa yedu Facebook account. Zvekushandisa kwemahara kwekutora pasi, isu tichafanirwa kudya kuziviswa, kunyange zvakajairika nekuti kugadziriswa kwewebhu hakuna mahara. Kana isu tichida kudzivirira kushambadzira tinogona kuwana kunyoreswa kwePrimiyamu kwe € 8,99 pamwedzi pamusoro pekuwana iyo yese katarogu isina muganho wekutora kwezuva nezuva.
Imwe webhusaiti inozivikanwa kwazvo kwatinogona kuwana katarogu yemabhuku anodarika 65.000 anowanikwa kurodha pasi. Isu tinowana mazita ezvese mhando zvingafungidzirwe, mune iwo emunyika mazambiringa evamwe pasina mubvunzo anomira. Iwo mabhuku anogona kutorwa pasi muEpub, PDF uye Mobi mafomati.
Kutenda kune enjini yekutsvaga, isu tichawana zvese zvatiri kutsvaga nekungopinda zita rebhuku ratiri kuda kurodha pasi nekudzvanya bhatani rekuburitsa. Kunyangwe zvichizoda isu kuti tinyore pane iyo peji kuti tishandise zvakanzi kurodha pasi.
Panzvimbo yechitatu tinowana Freeditorial, webhusaiti iyo inotipa iyo yakakura katarogu yemabhuku muPDF fomati uye kunyangwe hazvo saizi yekatalog yayo iri diki pane iwo maviri ataurwa mawebhusaiti. kare, hunhu hwakanakisa uye isu hatina kuwana chero zano rekushambadzira chero kupi. Iyi webhusaiti haidi kuti tinyore zvisati zvaitika uye mahara zvachose.
Iyo webhusaiti inomiririra yakachena, inonzwisisika interface, ine yakashomeka dhizaini dhizaini iyo inoita kuti kufamba kwemamenyu ayo kuve nyore. Kutenda kune yayo enjini yekutsvaga injini zvichave nyore kwazvo kuwana chero zita ratinenge tichitsvaga zvese kuburikidza nemusoro waro uye kuburikidza nemunyori waro. Pamusoro pechinyorwa chakakura muSpanish, tinogona zvakare kuwana mabhuku mazhinji muChirungu.
Ino nguva isu tine yakanyanya kuzvininipisa webhusaiti, iyo kunyangwe iine hombe katarogu yemazita aripo, hainyanyi kusvika padhuze neavo vataurwa pamusoro. Mune ino kesi isu tinowana angangoita zviuru gumi zvizere zvizere mazita ari muPDF fomati. Iwo mazita anogona kutorwa pasi zvese pakombuta yedu uye nenharembozha yedu yekutarisa nechero muverengi wePDF.
MuPlanetaLibro tinokwanisa kurodha pasi semazita mazhinji sezvatinoda pasina zvirambidzo kana kudiwa kwekunyoresa. Imwe bhenefiti inomira pachena ndeyekuti inotibvumidza kuverenga mabhuku zvakananga kubva pawebhu, pasina kudiwa kwekutora pamberi. Catalog yayo, kunyangwe iri diki pane mamwe mawebhusaiti pane iri runyorwa, ine mazita ezvese mhando zvingafungidzirwa.
Chekupedzisira, isu tinotaura kuti ndeipi imwe yemawebhusaiti anonyanya kushandiswa nevadzidzi kana nyanzvi mukutsvaga mabhuku pane dzidziso yezvidzidzo. Pawebhusaiti ino tinowana ese marudzi emabhuku anonyora chero mhando yehunyanzvi kune akasarudzika maprofessional. Iwo mabhuku ari muchiSpanish chakakwana uye akasununguka zvachose uye hatidi kunyoreswa kwepamberi kuti titorere zvakananga kubva pawebhu.
Pawebhusaiti ino tinowana anopfuura zana emabhuku akasununguka zvachose muPDF fomati, akarongedzwa munzvimbo dzakasiyana, kubva kumari, hupfumi kana chirongwa, mukusimudzira wega. Iyo inotibvumidza kurodha nyore uye nekukurumidza kuburikidza neayo enjini yekutsvaga injini iyo inotibvumidza isu kuti tiwane izvo isu zvatiri kutsvaga nekukurumidza, tinogona kutsvaga bhuku nemunyori, muparidzi kana zita.
Idzi ndidzo dzimwe nzira shanu dzatinokupa kubva kuActualidadGadget, asi Isu takavhurika kune zvako zvirevo, saka usazeze kusiya maonero ako mune zvakataurwa. Tichafara kuvagamuchira uye ivo vanozobatsira kwazvo kuvaverengi vedu. Nenzira iyi, mune chiitiko chekuvharwa kwakazara kweLectulandia, isu tichave takachengetwa uye hatizocherechedze kusavapo kwayo kukuru, sezvo iri webhusaiti inodikanwa kwazvo nevateveri vekuverenga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Gadget nhau » General » Kuvhara kweLectulandia: iwo mashanu akanakisa dzimwe nzira
Isu takaedza iyo Tineco iFloor 3 uye A11 Master + vanochenesa, kupukuta nekukorobha pasina tambo
Isu takaedza Aukey's new In-In-Ear mahedhifoni.